Kala beddel xogta jimicsiga! - Gofumed
Ka bedelaan xogta aan ollogga online ahaa!
Luulyo, 2015 Geospatial - GIS, aragti ugu horeysay
MyGeodata waa adeeg internet oo cajiib leh oo ay suurtogal tahay in la badalo xogta juquraafi, oo leh qaabab kala duwan oo CAD, GIS iyo Raster kala duwan, si loo kala saaro kala duwanaansho iyo nidaam tixraac.
Si sidan loo sameeyo, kaliya fayl garee faylka, ama tilmaam URL meesha lagu kaydiyo. Faylasha waxaa loo soo gudbin karaa hal mid, ama lagu cadaadiyo ZIP, RAR, 7Z, TAR, GZ, BZ2, LZ, Z, ARJ, CAB, iyo kuwo kale.
Adeeggu wuxuu taageertaa qaabab ka badan 60 vector iyo in ka badan raster 100. Kiisaska CAD / GIS waxaad ku soo gudbin kartaa qaababkan soo socda:
Shaygada ESRI Shapefile
Czech RUIAN Soodhadh
Tikidhada Caddaanka ah ee Qaadka
OpenStreetMap XML iyo PBF
Caymiska Diiwaanka / Isticmaalka Labiska
Arc / Info .E00 (ASCII) Caymiska
Macluumaadka Dakhliga PCI Geomatics
X-Qorshaha / Duulimaadka xogta gawaarida
Hannaanka Wareejinta Hydrographic
Faylasha Aeronav FAA
Qaabka MS Excel
Faafinta Dukumintiyada Furan
MS Office Open E-mail-ka
Kaydinta iyo qaabka isbeddelka
Marka xogta la soo dhejiyo, moobiilku wuxuu leeyahay sawir leh OpenStreetmap taariikhda, halkaas oo macluumaadka la soo dejiyey la soo bandhigay.
Hoos waxaa kuugu habeyn kartaa qaababka isbeddelka, sida beddelida xogta ama nidaamka isku-duwidda. Tusaale ahaan, waxaan haynaa xogta WGS84 waxaanan rabnaa inaan u gudbino ITRF91, SRS cusub.
Waxaad dooran kartaa astaamaha, aad u macquulsan si aad uhesho muqaalka, warqadaha ñ ama calaamadaha luuqadaha kale. Kadib waxaad dooran kartaa meelaha aan rajeyneyno inaan sii wadno.
Dabadeed natiijooyinka waxaa lagu dhigi karaa qaababkan:
Foomamka Wareegga ah ee la soo saaro
Heerka SOSI ee Norway
Ugu dambeyn, faylka waa la soo dejin karaa.
Adeegu waa bilaash, la file dulinka ilaa size in 20 100 MB iyo MB for raster, laakiin qaadashada deeqaha iskaa wax ka saari kara, kuwaas oo xayiraad iyo awoodda si ay u sii kaydiyaa.
Tag galka MyGeodata
Tani waa liiska dhammaan isbeddellada suurtogalka ah:
Post Previous«Previous 20 Tallaabooyin aad ku dhisi karto magaalo ka soo xoqid
Post Next Ka soo cararida Chapo Guzmán, oo ah shaqo ah injineer sareNext »